एकजना संक्रमितले कति जनालाई सार्छ कोरोना?
लकडाउन खुकुलो भएसँगै भीडभाड बढेको, सामाजिक दूरी कायम नगरेको, मास्क नलगाएको र नियमित हात नधोएका कारण एक व्यक्तिबाट अन्य व्यक्तिमा सरेकाले संक्रमितको दर बढेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
सुरुको चरणमा एक जनाबाट २ देखि ३ जनालाई सरेको जनस्वास्थ्यका डाक्टर रवीन्द्र पाण्डेले बताए । ‘एक जनाले ३ जनालाई, ३ जनाले ९ जनालाई, ९ जनाले २७ जनालाई गर्दै १० साइकल पूरा हुँदा ४९ हजारलाई सर्छ भन्ने थियो,’ उनले भने, ‘अहिले कोरोना संक्रमण भएको सबैबाट नसरेको रिसर्चले देखाएको छ ।’
लन्डनमा भएको अनुसन्धानबाट १० देखि २० प्रतिशतले मात्र अरुलाई सारेको देखिएको उनले बताए । ‘नेपालमा पनि एक संक्रमितबाट अर्को व्यक्तिलाई नसरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘एउटा परिवारमा एक जना संक्रमित हुँदा अरुलाई सरेको छैन ।’
पछिल्लो अध्ययनले ११ दिनपछि कोरोना भाइस सर्दैन भन्ने देखिएको छ । सिङ्गापुरमा भएको अध्ययनले ११ दिनपछि कोरोना सर्दैन भन्ने छ । सिङ्गापुरमा ११ दिनसम्म अस्पताल राखेर डिस्चार्ज गरिन्छ,’ उनले भने । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले पनि भाइरस ११ दिनपछि नसर्ने भनेको छ ।
नेपालमा लक्षणविहीनबाट पनि भाइरस सरेको पाइएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले लक्षणविहीनबाट भाइरस सर्दैन भनेको छ । अमेरिकाका विज्ञले यो गलत हो भनेको छ । नेपालमा लक्षण नभएकाबाट पनि सरेको पाइएकाे छ । यहाँ ९५ प्रतिशत लक्षणविहीन छन् । उनीहरूबाट नै सरिरहेको छ,’ उनले भने ।
नेपालमा अनुसन्धान नै भएको छैन
नेपालमा एक व्यक्तिबाट कतिलाई सर्छ भन्ने विषयमा अनुसन्धान नै भएको छैन । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका सदस्यसचिव डा. प्रदीप ज्ञवालीले यो विषयमा नेपालमा अनुसन्धान नभएको बताए ।
‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको हिसाबले हेर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा संक्रमित कहाँकहाँ पुग्यो ? उसले कतिलाई सार्‍यो भनेर हेर्नुपर्छ । अहिले यो डाटा उपलब्ध भएको छैन । यो कसले गर्ने भन्ने पनि छ,’ उनले भने ।